TTSweet: အီး လန့် သံချောင်း ...
အီး လန့် သံချောင်း ...
အန်တီဆွိတစ်ယောက်လဲ ဘလော့ဂ် တိုက်တယ်ဘားပေါ်မှာ " ဟင်းချက်နည်းလေးတွေ ရှယ်ပေးမယ်။ ရယ်စရာလေးတွေရှိရင် လာပြောပြမယ်။" ဆိုပြီး ဟင်းချက်နည်းတွေလဲ မရှယ်နိူင်၊ ရယ်စရာတွေလဲ မပြောနိူင်ပဲ ဘ၀ဇာတ်ခုံပေါ် ဇာတ်ဆရာအလိုကျ ကပြနေရတော့ (ရလဲ့ ...) ဘယ်အချိန် အလွမ်းခန်းရောက်မလဲ၊ ပျော်စရာအခန်းရောက်မလဲဆိုတာ မခန့်မှန်းနိူင်တော့ အပေါ်က တိုက်တယ်ဘားကိုပဲ ပြင်ရမလိုဖြစ်နေပြီ။
ကဲပါလေ... တိုက်တယ်လေးနဲ့ နဲနဲညီအောင် ရယ်စရာတွေလဲ မရေးရတာကြာပြီဆိုတော့ ရေးလိုက်ပါဦးမယ် ...မရယ်ရတောင် ပြုံးတော့ ပြုံးနိူင်ကြမှာပါ။ စလုံးကလူတွေ (ထမင်းစားချိန် ပို့စ်တင်မိလို့) ထမင်းစားရင်း ဒီပို့စ်မဖတ်ကြနဲ့နော် ။
မနေ့ညကပေါ့ဂျာ။ ထုံးစံအတိုင်း မိသားစုဆုံတဲ့ အချိန် အိမ်ရှေ့က စားပွဲနားမှာ တီဗီကြည့်ရင်း မိသားစုတွေ စုထိုင်နေကြတာ။
ဂျူဂျူ့ အဖေက စားပွဲအောက်မှာ ခုံပုလေးနဲ့ထိုင် သူ့ လက်ပ်တော့ကြီး ရှေ့ချပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ကလေးကြည့်လိုက်၊ ဖိုရမ်လေးဝင်ဖတ်လိုက်၊ သတင်းတွေကြည့်လိုက်၊ ဂျီတော့မှာ လေပွားလိုက်နဲ့ တီဗွီကလာတဲ့ Master Chef လဲ မလွတ်စေရဘူး။ ကြည့်နေရင်း သားအဖ၂ယောက် ဘယ်သူပြုတ်မယ်၊ ဘယ်သူတက်မယ်၊ ငြင်းရတာလဲ အမော။ ဂျူဂျူလေးကတော့ အိမ်စာလုပ်ရင်း တီဗွီကြည့်။ ဂျူဂျူတို့ အမေကတော့ ဆိုဖာပေါ်ထိုင်ပြီး မကြီးမငယ်နဲ့ အိုင်ပက်က Fruit Link ဆိုတဲ့ ဂိမ်းဆော့နေတယ်။ အသီးဆင်တူတာလေးတွေ ရှာပြီးနှိပ်ရတာ။ ပျော်စာကြီး ... ဟီးဟီး။
သားအမိ သားအဖတွေ အာရုံကိုယ်စီနဲ့ အားလုံးငြိမ်နေရာကနေ ဂျူဂျူ က ရုတ်တရက်ကြီး ...
" ဖေဖေ ... ဖေဖေ ... ဖေဖေ အီးပေါက်လိုက်တယ် မှုတ်လား " တဲ့ ...
ပထမတော့ ဂျူဂျူတို့ အဖေ အင်းမလုပ် ... အဲ မလုပ် ၊ မကြားတာလား၊ မကြားချင်ယောင်ဆောင်တာလား ... ငြိမ်နေတယ် ... အဲဒါ သူတစ်ခုခု အမှားလုပ်ပြီးရင် အမြဲလုပ်နေကျ အကျင့်။
သမီးက ထပ်မေးမှ ခေါင်းငြိမ့်ပြီး မပြောချင် ပြောချင်နဲ့ အီလေးဆွဲပြီး "အင်း .. " တဲ့လေ ...
သူ့အဖေက " အင်း .." လဲ ဆိုရော ဂျူဂျူတို့ နှာခေါင်းပိတ်ပြီး ပြေးပါလေရော ... ပြီးတော့ အော်သေးတယ်။
" နံတယ် ... နံတယ် ...ဖေဖေ အီးပေါက်တာ နံတယ် " ဆိုပြီး ..
သားအဖ ၂ယောက် ဖြစ်နေပုံကိုကြည့်ပြီး ဆိုဖာပေါ်က အန်တီဆွိက အသာလေး ပြုံးနေတယ်။ သူ့ကိုယ်သူ မေသန်းနုပဲ လိုလို ။ ပြုံးနေတဲ့အန်တီဆွိလဲ မကြာပါဘူး၊ ဦးမောင်ခြိ်မ့်ရဲ့ လျက်တပျက် လေပုပ်သိုင်းကွက်ကို မခံနိူင်ရှာ ... ရုတ်တရက် ပါးစပ်ထဲ ၀င်လာတဲ့ အနံ့ဆိုးကြောင့် ရှေ့ဆက်မပြုံးနိူင်တော့ပဲ နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်ကို အမြန်ပိတ်လိုက်ရတော့တယ်။ စောနက ပြုံးနေတဲ့ မေသန်းနုစတိုင်ကနေ ချက်ချင်း ခင်မို့မို့အေး ဖြစ်သွားတယ်။
" ဟမ်မလေးဟယ် ... ဆိုးလိုက်တဲ့ အနံ့ရယ် ... နံချက်တော့ ... "
ပါးစပ်ထဲထိ အနံ့ကရောက်သွားတော့ အန်တီဆွိ တော်တော် စိတ်ဆိုးသွားတယ်။ သူ့အဖေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့ အတော်ဝေးတော့ ဒီအထိတော့ အနံ့က ရောက်မယ်မထင်။ စောနက ပြုံးတောင်ပြုံးနေသေး။ ဂျူဂျူလေးလို အနားကပ်ထိုင်နေသူ ဘယ်လောက်များ နံလိုက်မလဲ ....
မိန်းမတွေများ အင်မတန်ခက်သည်။ အဲသလောက်နံနေတာကို ပြောချင်ဆိုချင်စိတ်က ထိမ်းမရတော့ ... အီးမုန်တိုင်းကြားမှာ နံနံနှင့်ပင် ...
" တော့ ... ကမောင်ခြိမ့် ... တော် အီးပေါက်မယ်ဆို ကျုပ်တို့သားအမိကို နဲနဲတော့ ကြိုတင် သတိပေးသင့်တယ် ထင်တာပဲ ... "
" ကျုပ်အရင်ကလဲ ပြောဖူးတယ် ... တော် အီးပေါက်တော့မယ်ဆို အီးပေါက်တော့မယ်ဟေ့ ... နှာခေါင်းတွေ ပိတ်ထားကြ ... အစရှိသဖြင့်ပေါ့ ... ခုဟာက ပေါက်ပြီးငြိမ်နေတယ် ... ဒါကောင်းလားတော် ..."
" သမီးတောင် သူအီးအီးပေါက်ရင် ဟိုးဖိနပ်စင်နဲ့ တံခါးထောင့်နား ပြေးပြေးပေါက်တာ တော်သိသားပဲ .... ခလေးကတောင် သိတတ်သေးတယ် ...ဟင်း ... "
ဟုတ်တယ်၊ ဂျူဂျူလေးက အင်မတန် သန္ဓေကောင်းတာ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက သင်ထားတော့ သူအီးပေါက်မယ်ဆို ပြေးပြေးထွက်သွားပြီး တံခါးထောင့်နားရာက်ရင် ဖင်လေးပစ်ပစ်ပြီး ပေါက်တာ။ အရင်ကမသိတော့ ဟဲ့သမီး ဘာလုပ်နေတာလဲဆို မေးရတယ်။ သူဖင်လေးပစ်နေပုံကြည့်ပြီး ရယ်တောင်ရယ်ရတယ်။ ချစ်ဖို့လဲကောင်းတယ်။ အဲဒီတံခါးထောင့်လေးကို အန်တီဆွိက ချစ်စနိူး "အီးပေါက်ကော်နာ (Farting corner)" လို့တောင် နာမည်ပေးထားတာ။
ခါတိုင်းတော့လဲ သူအဖေလဲ အပြင်ထွက်ထွက်သွားတာပါ။ ဒီနေ့ကျမှ ရာသီဥတုကလဲအေးတော့ အပြင်ဖက်ထွက်ရမှာ ပျင်းတယ်နဲ့ တူပါရဲ့။
ဂျူဂျူရဲ့ အီးပေါက်ကော်နာနား သူ့အဖေ ဘာလုပ်နေလဲမသိ။
၂၂ရက်မွေး၊ ဗုဒ္ဒဟူးသား - ၄ ဂဏန်းသမား ဘုဂလန့် ဦးမောင်ခြိမ့်ဟာ အင်မတန်ခေါင်းမာပြီး "ငါသေမှ လက်နက်ချမယ် ..." ဆိုတဲ့ စတိုင်နဲ့ ပြန် ပြောလိုက်တာက ...
" ဟေ့ ... ဒီမှာ ... အကုန်ကြားအောင် ဘူ လို့ အသံထွက်ပေါက်တာတောင် အီးပေါက်တော့မယ်ဆိုတာ သတိပေးရဦးမှာလားကွ ... "
ဟမ်မလေး သူပြောမှပဲ အန်တီဆွိမှာ ငိုရမလား ရယ်ရမလား ဘာပြန်ပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ ... ပထမတော့ ထုံးစံအတိုင်း ပါးစပ်အဟောင်းသားကြီးနဲ့ ...
ဒါပေမဲ့ အန်တီဆွိကလဲ ... သေရင်တောင် လက်နက်မချဘူးဆိုတဲ့ အစားထဲကဆိုတော့ကာ ....
" အော် ... အဲဒီတော့ တော် ဆိုလိုတာက တော်က ဘူ ဆိုတာနဲ့ ကျုပ်တို့ သားအမိ၂ယောက် ဟို မီးလန့်သံချောင်းခေါက်သလို အထုပ်ပိုက်ပြီး ... အဲလေ ... နှာခေါင်းပိတ်ပြီး ထွက်ပြေးရမှာပေါ့။ ဟုတ်လား .... ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ ... "
" နောက်ပြီး ခု တော်ကသာ ဘူ ကနဲမြည်တယ်ပြောတာ ... ကျမတော့ မကြားပေါင်တော် ... ကဲ သမီးရောကြားလား ... "
" ဂျူဂျူလဲ ကြားဘူးမေမေ ... "
"ငါသေမှ လက်နက်ချမယ့် လူကြီး ... နောက်ခါကျ ကျုပ်တို့ သားအမိ သနားသောအားဖြင့် ရှူးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ... ဘူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ... သတိလေးတော့ ပေးပါတော် ... တော့ အီးလန့်သံချောင်းသံကြီးတော့ နားမစွင့်ပါရစေနဲ့ .... "
(အန်တီဆွိတစ်ယောက် အီးပေါက်တဲ့ အကြောင်းတောင် ဘလော့ဂ်ရေးနိူင်ပြီဆိုတော့ကာ အခြေအနေပြန်လည်ကောင်းလာပြီဆိုတဲ့ သဘော (ဒါမှ မဟုတ် ဟီးဟီး ... အခြေအနေ အလွန်ဆိုးနေပြီဆိုတဲ့ သဘော) ပေါ့ဂျာ ...)
Posted by T T Sweet at 1:49 PM
AMK July 20, 2012 at 2:28 PM
၇ီလိုက် ရတာ တီဆွိ ရယ် "ငါသေမှ လက်နက်ချမယ် ..." ဆိုတာ သိပ်သဘောကျတာပဲ အဘတို့ စတိုင်ပေါ့
evergreen July 20, 2012 at 2:32 PM
Anonymous July 20, 2012 at 3:28 PM
သစ်သစ် July 20, 2012 at 4:06 PM
၂၂ရက်မွေး၊ - ၄ ဂဏန်းသမား ဘုဂလန့် <<<< တိန်..အမီးလည်း ၂၂ပဲ (ခံစားရတယ်ဂယ်ပဲ)...
ခေါင်းစဉ်က ဘာတဲ. အီးလန်. သံချောင်း ။ ပို.စ်ခေါင်းစဉ်နဲ.တင် ရယ်နေရပီ။ ခေါင်းစဉ် ကြည်.ပီး ဘာပါလိမ်.လို.။ ဟားဟား ။
ပို.စ်ကို ဖတ်ပီး တီဆွိ အခြေအနေပြန်လည်ကောင်း လာပီဟု မှတ်ယူလိုက်ပါကြောင်း။ :)
Aunty Oo July 20, 2012 at 4:14 PM
Anonymous July 20, 2012 at 4:18 PM
Anonymous July 20, 2012 at 8:27 PM
ဖတ်ပြီး အော်ရယ်နေရတယ်။ ဦးခြိမ့်ကွ! လုံးဝအလျှော့မပေးနဲ့!
(အခြေအနေကောင်းတယ်လို့ပဲ ယူဆပါတယ် အစ်မရေ။)
မီးမီးငယ် July 21, 2012 at 12:10 AM
Evy July 21, 2012 at 12:40 AM
:D :D :D အမယ်လေး ရီလိုက်ရတာ တီဆွိရေ။ တီဆွိတို့မိသားစုအကြောင်းလေးတွေဖတ်ရတာ အလွန်ပျော်ဖို့ကောင်း။ ခဏခဏရေးပါဦး။ စောင့်ဖတ်နေတာ
ဖိုးတုတ် July 21, 2012 at 1:18 AM
ဘလော့ဂါရဲ့ ယောကျာင်္းဖြစ်ရတာလည်း မလွယ်ပါလားနော်၊ ဗုံးပေါက်တဲ့အကြောင်း တကမ္ဘာလုံးက စာဖတ်ပရိတ်သတ်သိ ... (ပါးစပ်ရာ နခေါင်းပါ ပိတ်ပြီးရယ်မိ)
ချစ်ကြည်အေး July 21, 2012 at 1:52 PM
ဟားဟား ရယ်လိုက်ရတာ ဆွိရယ်။ ရေးတတ်ချက်တော်....း))))
Anonymous July 21, 2012 at 4:47 PM
Anonymous July 21, 2012 at 7:14 PM
Anonymous July 21, 2012 at 8:03 PM
ကျူးပစ်ထဲမှာဖတ်ပြီးပြီခုတစ်ခေါက် လာဖတ်သွားတယ် တီဆွိ
Touch Me Not July 22, 2012 at 12:00 AM
ဖတ်ရင်းနဲ့ သဘောတကျ ဖြစ်နေရတယ်။
Anonymous July 22, 2012 at 5:26 PM
Adora etc. July 24, 2012 at 11:37 AM
TTSweet စာမရေးတာကြာလို့ ဒီလို post လေးတွေမဖတ်ရတာကြာပြီ။ ခုတော့အလွမ်းပြေသွားပြီ။ တခါမှ comment မရေးဖူးပေမဲ့ အမဆီကိုခဏ ခဏအလည်ရောက်ပါတယ်.။
သက်ဝေ July 25, 2012 at 7:53 PM
ခုမှ ဖတ်မိတယ်... ရယ်လိုက်ရတာ... :D :D :D
San San Htun July 30, 2012 at 12:57 AM
ဘူ ဆိုတာနဲ့နှာခေါင်းပိတ် ပြေးပေရော့..ရယ်လိုက်ရတာ တီဆွိရေ..
မြစ်ချေသူ August 1, 2012 at 5:05 PM
အာဂျီနိူမိုတို (သို့) အချိုမှုန့် (သို့) MSG (သို့...